Mari iri kuda kupihwa bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana pabhajeti regore ra2018, yatambirwa zvakasiya-siyana munyika.
Asi vanhu vazhinji vari kunyunyuta kuti ishoma.
Kunyangwe hazvo mari iyi yawedzera kubva pamamiriyoni mazana maviri nemakumi masere akapihwa bazi iri gore rino, sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti mari iyi ishoma zvikuru kana pakatariswa zvinodiwa mubazi iri.
Munyori musangano reZADHR, Doctor Evans Masitara, vati mari yaiswa kubazi rezveutano ishoma zvikuru.
"Mari yapihwa bazi iri iri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvebhajeti renyika yose sezvakabvumiranwa kuAbuja," vadaro Dr Masitara.
Vanokokera nhengo dzeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai muparamende, huye vari mumiririri weMutare Central, VaInnocent Gonese, vatiwo vange vaine tarisiro yekuti hurumende izadzise zvibvumirano zvayakasaina.
"Isusu tanga takatarisira kuti hurumende icharemekefza chibvumirano chakaitwa kuAbuja mubhajeti regore rinouya iri'" VaGonese vaudza Studio7.
Vachitaura bhajeti risati raitwa, gurukota mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana, Doctor David Parirenyatwa, vakaudza Studio7 kuti vanoda mari inosvika biriyoni imwechete nemamiriyoni zana emadhora kuitira kuti vafambise mabasa ezveutano zvakanaka.
Asi sachigaro wedare remadzishe, Mambo Fortune Charumbira, vati vanogutsikana nemari yapiwa kubazi rezvehutano.
VaCharumbira vati mamwe mapazi mana apiwa mari yakawanda kudarika yehutano akakosha kuti vanhu vave nehutano hwakanaka.
Bazi rehutano rakatarisana nematambudziko akasiyana siyana anosanganisira vashandi vashoma, kuparara kwezvipatara, kushaikwa kwemishonga nemichina yechimanje manje inoongorora zvirwere huye mari zhinji inoshandiswa mubazi iri inobva kumasangano akazvimiririra.